Manolotra serivisy mpiasan'ny mpiasan'ny hetsika izahay amin'ireto sokajy manaraka ireto:
Mpanampy Info Booth
Mpanentana amin'ny hetsika Corporate
Modely amin'ny hetsika ara-panatanjahantena
Mpandika teny fampirantiana
Mpanentana hetsika an-dalambe
Tarika Leafleting hetsika
Mpanao fihetsiketsehana marika
Modely momba ny lamaody
Staff Staff fisoratana anarana
Mpanara-maso ny hetsika
Mpanentana amin'ny hetsika fampielezankevitra
Ny mpampiantrano valizy
Mpanolotsaina momba ny tradeshow
Ho an'ny fangatahana marina anao dia azafady mba hifandraisanao aminay Na amin'ny lanonana na hetsika, asehon'ny mpiasan'ny orinasa ny orinasa.
Ny tranoheva fampirantiana mifanaraka amin'ny matihanina dia manolotra ny orinasanao tsy any Belgrade ihany, fa koa ny karatra fitsidihanao ho an'ireo mpitsidika iraisam-pirenena. Izahay dia mandray ny fandaminana tsara tarehy tsy avy amin'ny tananao fa manohana anao amin-kery sy amin'ny antsipiriany kely indrindra amin'ny fampiharana ny hevitrao.
Ny mpampiantrano anay sy ny mpampiantrano azy dia voaofana tsara ary manana fahaiza-manao PC manokana sy ny fiteny vahiny.
Ny ekipanay dia manome antoka fa ny fisehosehoanao marina sy ny hetsika ataonao dia fahombiazana lehibe.
Na izany aza, tsy hadinonay ny zavatra nahatonga antsika hahomby: Ny fahafaham-po ho an'ny mpanjifa ho laharam-pahamehana, ny fikarakarana manokana sy ny fahatokisana ny kalitao ho lohahevitra voalohany.
Manana vokatra tsara ianao ary te hampitombo ny fahitana eo amin'ny varotra amidy?
Ny AGENCY SNOB dia manampy anao amin'ny famolavolana, ny fandaminana ary ny fanatanterahana ny fampiroboroboana ny varotra.
Satria tsy amidy amin'ny tenany intsony izao, dia mahatsapa Promosiana, izay mikendry. Ny mpiasan'ny fampiroboroboana dia noho izany antony nomanin'ny fiofanana momba ny vokatra Corporate, ny fampiofanana amin'ny varotra sy ny tsara indrindra amin'ny asa.
Ny fanentanana mahomby dia mampitombo ny lanjan'ny orinasa sy ireo vokatrao. Azonao atao ny mametraka mpanjifa amin'ny adiresy manokana, adiresy vaovao, ary avy eo dia mahazo fandresena hitantana.
Ny fananganana ny vokatrao mahomby dia manohana tsara amin'ny fampiroboroboana fanavaozana ary manome toky anao ny fahatsiarovan-tena.
Tao anatin'ny 7 taona mahery teo amin'ny orinasa izahay dia nianatra fa ny tsiambaratelon'ny fahombiazana ho an'ny hetsika iray dia ekipa mpampiantrano sy mpampiantrano izay matihanina, zatra miara-miasa, ary eo no manampy ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny fikambanan'ny vahiny. amin'ny fomba rehetra. Afaka milaza amim-pireharehana isika fa nahita ny ilaina amin'ny fampiantranoana / mpampiantrano tena ilaina amin'ity tsena mitombo ity.
Ny serivisy malaza indrindra:
Toe-javatra mahazatra sy lanonana fombafomba
Manam-pahaizana manokana momba ny fikarakarana hetsika ofisialy izahay: ho an'ny mpanjifan'ny governemanta sy ny orinasam-bola, dia manana mpampiantrano sy mpampiantrano tompom-pahaizana izahay izay manana ny lanonana ara-pomba. Ho fanampin'ny fanolorana kanto sy fitondran-tena mety amin'ilay hetsika, dia apetrakay tsara ireo fepetra takian'ny hetsika amin'ny fanontaniana sy ny fitsipiky ny fiarovana azy.
Amin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety sy hetsika fanaovan-gazety, ny mpiara-miasa aminay dia handray tsara ireo mpandray anjara tonga, haingana sy am-pitandremana am-pahamarinana ny fanoratana ireo solontenan'ny mpanao gazety, ary hanampy amin'ny fampiasana mikrô mandritra ny hetsika.
Na fihaonambe iray andro na andro maro dia hisy ny mpiara-miasa amintsika, manomboka amin'ny fiomanana hatramin'ny faran'ny hetsika ary vonona hanampy amin'ny olana rehetra mety hitranga.
Fampirantiana eto an-trano sy any ivelany
Afaka matoky isika fa ny ekipantsika dia mitazona ny anjarany amin'ny fotoana rehetra, na any Hongria na any ivelany. Isika misoratra anarana sy mandray ny vahiny, manampy ny efitrano fandraisam-bahiny ao amin'ny hotely, manome vaovao momba ny fandaharam-potoana ho an'ny hetsika, mizara fitaovana fandikana - amin'ny teny rehetra, dia manao ny zavatra rehetra izahay mba hanomezana fahafaham-po ny vahiny sy ny mpikarakara.
INDRINDRA INDRINDRA AN-TOKARISANA
FAHORIANA AZONAO MITADIKA
INDRINDRA AN-TRANO FANDROSOANA NY DIKAN'OLAKA REHETRA - CACIB BELGRADE
INTERNATIONAL NAUTIC, HUNTING & FANOMPOANA AZY
INDRINDRA AN-TOKONY ISIKA
INDRINDRA INDRINDRA: FIVORIANA ENTANA
FIVORIANA INDRINDRA sy FAHAFAHANA KOSMETIKANA, HAIRCARE, AESTHETICS SY FAHASALAMANA
AN-TRANO FIVAROTANA NY FIVORIANA TRANO VONDRONA
FAHAGAGANA AN-TANTARA TEKNIQUE SY FIKAMBANANA TEKNIKA (UFI)
FIVORIANA FOTOTRA FOTSOTRA FARANY
NY FIVORIANA mahomby
BALKAN COOL & FRUVEG EXPO
INTERNATIONAL GRAPHIC, PAPER AND CREATIVE INDUSTRY FAIR - GRAFIMA
INDRINDRA AN-TOKONY ARY FIKAMBANANA NY FIKAMBANANA - BIROEXPO
FAHORIANA TEKNOLOJORO FIVORIANA SY FIVORIANA
AN-TRANO FIVORIANA INTERNATIONAL ENERGY
ANTANAN-TENAN-TENAN-TENAN-TENALA AN-TENIKA AN-TOKONDRANANA SY FAMPISEHANA
INDRINDRA INDRINDRA AN-TOKONY MEDICINE
BAIBOLY INDRINDRA INDRINDRA
SADIA NY FAMPIANARANA FAMPIANARANA sy FIKAMBANANA
BELL FAIR - FAHAFAHANA FAMPIANARANA
SORATRA FAHADIANA, FANOMPOANA ARY FIKAMBANANA
NY FANDROSOANA AN-TOKONDRANANA, FIVORIANA SY FIKAMBANANA (INDRINDRA)
FAMPISEHOANA NY MACHINES, TOOLS SY PRODUCTION MATERIALS momba ny indostrian'ny asa soa (UFI)
TAMIN’NY FIVORIANA FAHASOA SY RANOMPOAN-droa
FIVORIANA FANAO VOLO